ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: အိမ်နံရံမှာ ဥယျာဉ်တည်
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 7:40 AM
သြစတြေးလျနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ???
is Australia developing country? r u sure?
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်မက သြစတြေးလျကို ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံလို့ သုံးနှုံးမိလို့ မဟုတ်သေးတဲ့အကြောင်း ဖွံ့ဖြိးဆဲ နိုင်ငံအဆင့်မှာသာ ရှိသေးကြောင်း သြစတြေးလျ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်ဟိုက် ကိုယ်တိုင်က ပြန်ဖြေရှင်းဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲလို့ ကျွန်မ သုံးနှုံးတာပါ...
do you have any information about that you could share me?
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီအတွက် သီးသန့် ပို့စ်တခု ရေးပြီး ဘလော့ပေါ် တင်ပေးပါ့မယ်ရှင်... ကျွန်မ အထူး မှတ်မိတဲ့ စကားကတော့ ကိုယ်မရောက်သေးတဲ့ အခြေအနေ တခုကို ဂုဏ်မက်ပြီး တံဆိပ်တပ် ခံတာဟာ အင်မတန် ဘေးများကြောင်း၊ ဂုဏ်တခုကို တန်အောင်နေရတာ ထိန်းရတာ ခက်တဲ့ အကြောင်း အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံ နေထိုင်ရတာ ပိုမြင့်မြတ် ဂုဏ်ရှိတဲ့အကြောင်း မနိုင်မနင်း အတင်းလိုက်မီအောင် လုပ်ရတာ ပိုဘေးများ ရှက်ဖို့ကောင်းကြောင်း သူက ရှင်းပြလိုက်ပါသေးတယ်။
great..will be looking forward to that.. cheers